Imibuzo eyi-6 ozozibuza yona ngaphambi kokuqala i-Website Design | Martech Zone
Ukwakha iwebhusayithi kungaba ngumsebenzi owesabekayo, kepha uma ucabanga ngayo njengethuba lokuhlaziya ibhizinisi lakho futhi ucije isithombe sakho, uzofunda okuningi ngomkhiqizo wakho, futhi ungahle ukujabulele ukukwenza.
Njengoba uqala, lolu hlu lwemibuzo kufanele lusize ukukuyisa endleleni efanele.
Yini ofuna iwebhusayithi yakho ikufeze?
Lona ngumbuzo obaluleke kakhulu okufanele uwuphendule ngaphambi kokuba uqale lolu hambo.
Cabanga “ngesithombe esikhulu.” Yiziphi izinto ezintathu eziphezulu ozidingayo noma ozifunayo kuwebhusayithi yakho? (Ukusikisela: Ungasebenzisa lolu hlu ukukusiza uthole impendulo!)
Ingabe uyisitolo sezitini nodaka esidinga ukuhlinzeka ngolwazi ngendawo yakho nokuthi yini onayo esitokweni? Noma, ingabe udinga ukunika amandla amakhasimende ukuthi aphequlule ngokushesha, athenge, futhi athenge kusuka kusayithi lakho? Ingabe amakhasimende akho afuna okuqukethwe okukhuthazayo? Futhi, bangathanda ukubhalisela i-e-newsletter ngokuqukethwe okuningi?
Bhala phansi zonke izidingo zakho ephepheni bese uzibeka phambili. Ngemuva kwalokho, ungasebenzisa lolu hlu lapho uhlola abahlinzeki bewebhusayithi, abaklami, nabathuthukisi.
Ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla: Isayithi eliyisisekelo likhuluma ngezinto ezibalulekile, Isiza se-Ecommerce sikuvumela ukuthi uthengise ku-inthanethi, futhi amabhulogi akuvumela ukuthi wabelane ngokuqukethwe nemibono.
Ungakanani ongakwazi ukukusebenzisa?
Cabanga ngesabelomali sakho bese uhlola zonke izindleko ngaphambi kokuthatha i-leap. Qiniseka ukuthi usebenza ngokubambisana nawo wonke amalungu eqembu ukukhipha uhlu olunengqondo lwezindleko. Kungenzeka ukuthi isabelomali sakho sikwenzela izinqumo eziningi.
Uma usebenza kwisabelomali esiqinile, uhlu lwakho lwezidingo eziphezulu luzokusiza ukunquma ukuthi yini okufanele ibekwe phambili. Ngabe uzodinga ikhasi elilula lokufika, noma isiza esigcwele? Uma ungobuchwepheshe be-tech futhi ungadingi ukwenza ngokwezifiso, ikhasi elilodwa lokufika elakhelwe kusifanekiso lingakusebenzela ngaphansi kwe- $ 100 / ngonyaka. Uma udinga ukuklama nokuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwewebhu oluphelele ngezici zangokwezifiso ze-backend, kungenzeka ukuthi uzokhokha ngaphezulu kwe- $ 100 / ihora lephrojekthi engathatha amahora angamakhulu.
Njengomthetho ojwayelekile, uma kufushane isikhathi sokuhola sokwakha iwebhusayithi, izindleko ziphakama. Ngakho-ke uma iwebhusayithi yakho iyinkimbinkimbi kakhulu — okusho ukuthi uma iqukethe amakhasi amaningi ahlukene akhangisa uhla olukhulu lwemikhiqizo nezinsizakalo — uzofuna ukuqinisekisa ukuthi uhlela uhlelo lokuqalisa olufanele ukugwema izimali eziphakeme ngokungadingekile.
Lokho kusho, ukwakha iwebhusayithi akudingeki ukuthi kuthathe unomphela. Ake sithi unamasonto ambalwa kuphela: Ungakhetha ithempulethi eyakhiwe kabusha kusuka ku-WordPress noma kwenye ipulatifomu. Amabhulogi alula, amahle angasetwa ngokushesha, futhi ungafaka nezakhi ezimbalwa zenkambiso, futhi.
Uma udinga ukubeka iwebhusayithi yakho ukwethula ngosuku oluthile noma umcimbi, qiniseka ukuthi uyakudlulisa lokho ngaphambili. Ungadinga ukunikela ngokusebenza okuthile ukubuyisela isivinini.
Unawo umkhiqizo ocacile?
Iwebhusayithi yakho kufanele ikhombise umkhiqizo wakho ngokusobala ukuze amakhasimende akwazi ukukukhumbula futhi akukhumbule. Lokhu kucaca kuyisihluthulelo sokwakha umkhiqizo wakho ukuze uphumelele isikhathi eside. Izinto ezifana ne-logo yakho, izithombe zekhanda, izitayela zemenyu, ama-palettes wombala, i-typography, izithombe, nokuqukethwe konke kunikela kusithombe sakho somkhiqizo, futhi kufanele kungaguquguquki.
Uma ungakaze usebenze nomklami obonwayo kumkhiqizo wakho, yenza ukuswayipha okuyisisekelo kwewebhu ukuze uthole izibonelo ezinhle zemikhiqizo engaguquguquki lapho ungathola khona ugqozi. Uzobona ukuthi amawebhusayithi abukeka kanjani futhi azizwe ehlukile kanjani kuwebhu yonkana ngenxa yombala wenkampani, ifonti, nezinketho ezibonakalayo. Qiniseka ukuthi ucacisa ukubukeka kwenkampani yakho futhi uzizwe engqondweni yakho ukusiza ukuhola ukukhetha kwakho kwewebhusayithi. Uma udinga usizo, ama-99designs ahlinzeka ngezinsizakalo ngendlela yemincintiswano yokuqamba engakusiza ukuthi uhlole umkhiqizo ohlukile "ukubukeka nokuzizwa", kuqala nge-logo yakho.
Yikuphi okuqukethwe engikudingayo?
Ukubambezeleka ekudalweni kokuqukethwe kungadonsela ukwethulwa kwewebhusayithi emuva. Umklami wakho wewebhu noma unjiniyela ngeke abhale ikhophi lakho, akhethe izithombe zakho zephothifoliyo, noma ahlanganise ubufakazi bakho bevidiyo. Yenza uhlu kusenesikhathi konke okuqukethwe okuzodinga ukukuqoqa (noma ukukhiqize), kanye nohlelo oluqinile lwezinsuku zokugcina nemisebenzi. Lokhu, futhi, kufanele kuhambisane nomkhiqizo wakho nezidingo zezithameli zakho ezihlosiwe. Isibonelo, uma uthengisa izingubo zezingane okuqukethwe kwakho kufanele kukhulume nomama, ubaba, futhi mhlawumbe nogogo. Futhi, izithombe zakho kufanele zibonise izithombe zezingane ezimomothekayo ezibukeka zizinhle kulayini wakho wezingubo.
Yini oyithandayo - futhi oyizondayo?
Bhala konke ukuthambekela nokubukwayo nezakhiwo ongathanda ukuzihlola nokuzigwema, futhi ube nezibonelo zamawebhusayithi owathandayo (nezincazelo zokuthi kungani uwathanda). Zama usesho olufana "nokwakhiwa kwewebhu" ku-Pinterest ukukuqalisa. Ukusetha okucacile kokufanele ukwenze nokungafanele ukwenze kuzokwenza inqubo yokuklama ibe lula kakhulu, futhi ukubeka izintandokazi zakho ngaphambi kwesikhathi kungakongela amathani ekhanda elingadingekile phansi komgwaqo.
Ukusesha kwe-Pinterest kokuklama kwewebhu okukhuthazayo.
Tags: brandisabelomaliUkuhlelaukuhlela iwebhusayithiizingqinamba zesikhathiisabelomali sokwakhiwa kwewebhuukuhlelwa kokuklanywa kwewebhusayithiimigomo yewebhusayithiugqozi lwewebhusayithiukuhlela iwebhusayithi